Ny lalàn'i ganagana any Illinois - ny fampiasana manokana ny cannabis & legalization ao amin'ny CRTA ao Illinois
Ny fanovana ara-dalàna ny lalàna momba ny ahidratsy any Illinois amin'ny taona 2020 - mety tianao ho fantatra hoe ohatrinona no azonao na hitombo ianao - manazava ny fitomboan'ny trano sy ny fanaovan-dalàna any IL izahay. Firy ny zavamaniry azonao ambolena any Illinois?
Te hanandrana Delta-8 THC?
Inona no lazain'ny lalàna vaovao momba ny ahi-dratsy momba ny fampiasana rongony manokana any Illinois?
Lalàna vaovao iray manara-dalàna ny fampiasana rongony ara-pialam-boly dia nolavina tao Illinois tamin'ny 31 Mey 2019. Ny fanjakana dia nandrara ny faha-11 tao amin'ny firenena mba hamela ny fampiasana rongony ara-pialam-boly, fa ny fanjakana voalohany amin'ny fananganana ara-dalàna ny cannabis amin'ny alàlan'ny fizotry ny lalàna.
Araka ity lalàna vaovao cannabis ity. "Ny Fihaonambe dia mahita sy nanambara fa ny fampiasana rongony dia tokony ho ara-dalàna ho an'ny olona 21 taona na mihoatra."
Lalàna ahidratsy tany Illinois
Eto ambany izahay dia miresaka ny vaovao Lalàna ahidratsy tany Illinois izay efa manomboka eo amin'ny 1 Janoary 2020, sy ny sisa. Aza adino fa ny lalàna cannbis dia mivoatra haingana, koa avereno jerena indray momba ireo lalàna faran'izay betsaka any Illinois.
Tsy manana lalàna marijuana i Illinois
Nosoloin'i Illinois ny anarana hoe "marijuana" amin'ny anarana biolojika, Cannabis, taona maro lasa izay. Na dia nandritra ny fandrarana aza dia nantsoin'i Illinois ho rongony ny rongony. Mbola mitohy izany ankehitriny miaraka amin'ny lalàna mifehy ny cannabis sy ny lalàna mifehy ny rongony vaovao any Illinois.
Iza no mahazo mivarotra rongony?
Tany am-boalohany, ireo dispensatera nomena fahazoan-dàlana ihany no mahazo mivarotra rongony ara-pitsaboana rehefa lasa lalàna ny volavolan-dalàna tamin'ny Janoary 2020. Betsaka ny fahazoan-dàlana homena toeram-pivarotana hafa amin'ny faran'ny taona.
Efa misy maro amin'ireo dispensarian amin'ny faritra isan-karazany. Amin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia voalaza fa akaiky ny fivarotana 300 no amidy rongony.
Na izany aza, mbola anjaran'ny governemanta monisipaly sy ny distrika ny manapa-kevitra raha afaka miasa ao amin'ny faritra iadidian'izy ireo ny mpivarotra rongony.
Aiza no ahafahanao mifoka rongony?
Araka ny lalàna vaovao dia avela ao an-trano sy ao anaty tranon'ny mpivarotra rongony ny sigara mamoaka rongony. Na izany aza, ho voarara ny fifohana sigara amin'ireto faritra manaraka ireto:
Faritra maro, toy ny arabe sy ny kianja
Amin'ny fiara mpitondra fiara na an'ny tenany manokana na tsia
Manakaiky ny biraon'ny polisy, na akaikin'ny mpamily fiara fitateram-bahoaka izay mbola eo amin'ny asany
Tao anatin'ny efitranon-tsekoly. Na izany aza, fanilihana no atao amin'ny raharaha rongony rongony
Manatòna izay olona tsy ampy 21 taona
Raha avela hifoka rongony eny an-tokantranon'ny tranonao ianao, dia manan-jo mandrara izany ao anatin'ny trano fonenany ny tompona trano. Ny kolejy sy ny oniversite dia havela ihany koa mandrara ny fifohana sigara eny amin'ireo andrim-panjakana.
Ny ankamaroan'ny karazan-tsakafo mety hanjavona
Araka ny lalàna, ny mponin'i Illinois dia avela hanana voninkazo cannabis 30 grama, fivondronan'ny cannabis 5 grama, ary 500 miligram amin'ny otrikaretina tafahoatra. Ny vokatra voaforona cannabis dia misy tinctures sy edibles.
Ny hetra mivarotra no hampiharina amin'ny vokatra marijuana rehetra. Ohatra, ny vokatra izay tsy ampy 35% ny THC dia hanana hetra mivarotra amin'ny 10%. Edibles sy ny vokatra vita amin'ny tsiranoka cannabis dia hetra amin'ny 20%. Ny vokatra miaraka amina fifantohana THC mihoatra ny 35% dia hanana hetra fivarotana eo ho eo amin'ny 25%.
Ankoatra ny hetra amin'ny varotra, dia hetra 7% mahery no ampiharina amin'ny rongony rongony novidin'ny mpamboly tany amin'ny fotoam-pivoriana. Azo antoka fa, amin'ny faran'ny andro, handalo amin'ny mpanjifa io vidiny io.
Avy aiza ny gnabis amidy?
Amin'izao fotoana izao dia misy trano fambolena marijuana 20 any Illinois. Amin'ny fiandohan'ny volana Janoary 2020, ireo no hany trano avela hamboly rongony. Ao anatin'ny taona, mpamboly asa-tanana ireo liana amin'ny fampitomboana marijuana dia avela handefa ny taratasy fangatahana fahazoan-dàlana ho azy ireo. Homena lisansa ireo fotodrafitrasa afaka maniry hatramin'ny 5000 metatra toradroa.
Ara-dalàna ny fambolena marijuana ho an'ireo izay mandray marijuana ho an'ny tanjona ara-pitsaboana.
These marary dia avela hamboly zava-maniry marijuana 5 amin'ny fotoana rehetra.
Etsy ankilany, ireo mpampiasa marijuana fialamboly dia tsy mahazo mamboly rongony ao an-tranony.
Ny fanaovana izany dia hisarika sazy 200 $.
Iza no avela hitombo amin'ny cannabis ao Illinois
Raha misoratra anarana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fandaharan-jaza ianao, ary ao anatin'ny fetin'ny vanim-potoana napetraky ny lalàna, dia afaka mamboly rongony ianao. Mila mponina amin'ny fanjakana koa ianao mba havela hamboly ahitra any an-trano. Araka io lalàna io, dia mponina ihany "Olona iray ao amin'ny fanjakana mandritra ny 30 andro."
Raha manondraka rongony ianao, dia mila miady amin'ny zavamaniry. Azonao atao ny manana mpandraharaha hanao izany ho anao mandritra ny fotoana fohy rehefa tsy eo ianao. Nilaza izany fa tsy tokony hidirana na ampiasain'ny olona tsy nahazo alàlana ny zavamaniry.
Cannabis maniry an-trano any Illinois?
Araka ny lalàna, ny zavamaniry mariana dia tsy maintsy hitombo ao amin'ny toeram-pivoahana sy voahidy mihidy. Izany dia hiantoka fa tsy ho azon'ireo olona tsy nahazo alàlana ny zavamaniry. Tsy ara-dalàna ny manondraka ny zavamaniry amin'ny toerana iray azon'ny besinimaro mora foana.
Ankoatr'izay, izay rehetra voasoratra anarana hitombo ny zavamaniry rongony dia voarara tsy hanome ilay zavamaniry na vokatra ampidirina rongony amin'ireo mpifanila vodirindrina na namana na olona hafa amin'izany. Ny fanaovana izany dia tsy hisarika sazy fotsiny, fa hitarika amin'ny famongorana ny trano mitombo tsy an-kijanona.
Aiza no ahazoana masomboly rongony?
Ny mason-drongony dia atolotra amin'ny dispensaries samihafa nomena alalana hamidy vokatra rongony. Tsy ara-dalàna ny mividy voa ho an'ny olon-kafa. Ireo izay voasoratra anarana amin'ny alàlan'ny fangorahana ihany no mahazo mividy voa sy hamboly ny zavamaniry cannabis raha tsy misy fahazoan-dàlana.
Fampiasana sy otrikaretina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny 21 taona
Araka ny lalàna vaovao, heloka amin'ny heloka bevava na iza na iza ambanin'ny 21 taona dia ho heloka bevava. Ny sazin'ny fandikan-dalàna tahaka izany dia miankina amin'ny toe-javatra atrehina, ary mety ho:
Fanafoanana ny fahazoan-dàlana mitondra fiara raha toa ka mitondra fiara ny olona tamin'ny fotoana nanaovan-dry zareo izany
Ny vola tsy latsaky ny $ 500 raha ray na reny na mpiambina mamela ny olona tsy ampy fetra hampiasa rongony
Fonjan'ny fonja raha misy heloka hafa natao nandritra ny herin'ny rongony
Na dia takiana aminao aza ny hamoaka antontan-taratasy ilazana mba hanamarinana ny taonanao rehefa mividy vokatra rongony, dia harovanao ny mombamomba anao manokana. Ny mpivarotra dia tsy voatery hitanao ny mombamomba anao. Raha manao izany izy ireo dia mila ny fanekenao voalohany.
Vantany vao lasa lalàna io volavolan-dalàna io, ireo izay te-hihinana rongony ho amin'ny fialam-boly na ny fitsaboana dia hanana fotoana mora kokoa hahazoana ny vokatra rongony ilain'izy ireo. Hahazo vola koa izy ireo satria ny raharaham-barotra rehetra dia hatao mifanaraka amin'ny lalàna.
Na izany aza, ireo izay latsaky ny 21 taona dia tokony hijanona tsy hampiasa marijuana na izay vokatra mifandraika amin'izany satria mety hiteraka olana amin'izy ireo amin'ny mpitandro ny filaminana.